Thwebula PicsArt 15.1.6 – Vessoft
AndroidIzithombe nezithombeAbahleli bezithombePicsArt
Isigaba: Abahleli bezithombe
Ikhasi elisemthethweni: PicsArt
Amazwana ku PicsArt
PicsArt software ehlobene
I-B612 – uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lokwenza i-selfie, elathola ukuthandwa okukhulu phakathi kwabasebenzisi ngenxa yezimpawu eziningi ezingejwayelekile kanye nokusebenzisa kalula.
Isofthiwe inhlanganisela yezimpawu enkulu amathuluzi kanye nemiphumela ukucubungula izithombe. Isicelo baxhumana ikhamera zedivayisi futhi isekela izilungiselelo ezahlukene ukudala okusezingeni izithombe quality.
IHotspot Shield – ithuluzi lokuqinisekisa ubumfihlo kwi-inthanethi. Isoftware ikuvumela ukuthi ufihle ikheli le-IP lomsebenzisi futhi uthole ukufinyelela kumasayithi avinjelwe.
I-Gmail – uhlelo lokusebenza ukusebenza nge-imeyili evela kwensiza yakwaGoogle. Isoftware ilawula imeyili ngama-akhawunti amaningi wokucushwa komuntu siqu.